Manchester United Vs Villarreal: Hordhaca Kulankooda Champions league-ga Harry Maguire iyo xidigaha kale ee Maqan, Shaxda | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Manchester United Vs Villarreal: Hordhaca Kulankooda Champions league-ga Harry Maguire iyo xidigaha...
Manchester United Vs Villarreal: Hordhaca Kulankooda Champions league-ga Harry Maguire iyo xidigaha kale ee Maqan, Shaxda
afar bilood ayaa laga joogaa markii ay guuldarro ka soo gaartay finalka Europa League kooxda Villarreal , Manchester United ayaa ka aar gudan doonta dhiggeeda Spain marka ay labada kooxood isku arkaan wareega group -yada Champions League.
Red Devils ayaa guuldarro lama filaan ah 2-1 kala kulantay Young Boys kulankoodii furitaanka Group F, halka Villarreal barbaro 2-2 ah la gashay Atalanta.
Manchester United: Cadaadiska saaran Ole Gunnar Solskjaer ayaa u muuqda mid ka maqnaan doona seddex ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan.
Aaron Wan-Bissaka ayaa ganaax ku maqan kaarkii tooska ahaa ee uu ka qaatay Champions League, halka Harry Maguire uusan soo laaban doonin ilaa fasaxa xulalka.
Solskjaer ayaan gabi ahaanba meesha ka saarin Luke Shaw laakiin waxa ay noqon doontaa lama filaan weyn hadii uu taam u noqon karo in uu ku soo bilowdo bartamaha todobaadka.
Donny van de Beek, Jadon Sancho, Jesse Lingard, Anthony Martial iyo Edinson Cavani ayaa doonaya in lagu soo bilaabo kulanka Villarreal.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 13 gool 19 kulan oo xirfadiisa ciyaareed ah oo uu ka horyimid Villarreal, inkasta oo kaliya labo gool uu dhaliyay lixdii kulan ee ugu dambeysay.
Villarreal: Gerard Moreno, oo gool dhaliyay finalkii Europa League ee ay ka badiyeen Manchester United bishii May, ayaan diyaar ahayn ka dib markii uu seegay kulankii Real Madrid ee isbuucaan.
Dhanka kale, garabka aadka loo qiimeeyo Samuel Chukwueze ayaan weli diyaar u ahayn kooxda martida ah. Dani Raba iyo Yeremi Pino ayaa iyagana dhaawac ah. Francis Coquelin waa ganaax.
Pau Torres ayaa kasoo laabtay fasaxiisii ​​dheeraa ee horaantii bishaan wuxuuna safan doonaa kulanka United.
Shantii kulan ee tartamada Yurub dhex maray Manchester United iyo Villarreal ayaa dhammaantood ku dhammaaday barbaro, iyadoo afar ka mid ah ay goolal la’aan yihiin, marka laga reebo finalkii UEFA Europa League ee xilli ciyaareedkii hore (1-1), kaasoo ay Spanish-ku ku adkaadeen rigoorayaal 11-10.
Afarta isku dhac ee Uefa Champions League ee u dhexeeya Manchester United iyo Villarreal ayaa dhamaantood ku dhammaaday 0-0, taasoo ka dhigaysa ciyaartii ugu dheerayd taariikhda tartanka ee aan wax gool ah la dhalin.
Manchester United ayaan wax guul ah gaarin todobadii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxaha reer Spain tartanka UEFA Champions League (D3 L4), guushoodii ugu dambeysayna waxay ka gaartay Real Sociedad bishii October 2013 (1-0).
Previous articleBenfica Vs Barcelona: Hordhaca Kulanka, Sergio Agüero iyo Xidigaha kale ee Maqan , Shaxda ciyaarta
Next articleJuventus Vs Chelsea: Hordhaca Kulanka ugu Adag Champions league-ga, Christian Pulisic	iyo xidigaha kale ee ka maqan
Bukayo Saka, iyo Kieran Tierney oo ku soo laabtay tababarka Arsenal
Jurgen Klopp oo ka Warbixiyay Xaalada Dhaawac ee Thiago, Curtis Jones Xidiga soo Laabanaya ka hor kulanka Man United
Liverpool oo xiiseyneysa inay dib ula soo saxiixato Xidiga Manchester City Raheem Sterling
Chelsea oo diyaar u ah inay bixiso 42 milyan ginni si ay ugu soo celiso Eden Hazard
Weeraryahanka PSG Lionel Messi oo kooxda ku riixaya Isdhaafsi ku aadan Mauro Icardi iyo Sergio Aguero
Wararka Ugu Danbeeyat Bruno Fernandes oo Laga Yaabo Inuu Seego Kulanka Liverpool